ဆွီဒင်အွန်လိုင်းကာစီနိုဆိုဒ်များ - အွန်လိုင်းကာစီနိုအပိုဆုကုဒ်များ
(276 ပျမ်းမျှအားမဲ: 5.00 )5ထဲက
Loading ... ဇန်နဝါရီလ 2018 ၏အဖြစ်လောင်းကစားပုံစံအားလုံးကိုဆွီဒင်အတွက်ဥပဒေရေးရာဖြစ်ကြသည်။ Penninglotteriet နှင့်Tipstjänst: ဤလယ်ပြင်၌မိုနိုပိုလီကုမ္ပဏီနှစ်ခုရဲ့ပေါင်းစည်းခြင်းဖြင့် 1997 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးအစိုးရပိုင် Svenska Spel, ကပိုင်ဆိုင်သည်။ Svenska Spel မြေယာ-based တိုင်းပြည်အတွက်ကာစီနိုလောင်းကစားရုံအဖြစ်ထီ၏ကဏ္ဍလုပ်ကိုင်လျက်ရှိကြောင်းသိရသည်။ အဆိုပါလောင်းကစားရုံအတွက်ဆွီဒင်အတွက်လောင်းကစားအပေါ်ဥပဒေအရသင်သည်ထိုကဲ့သို့သောကစားတဲ့, ကင်လုပ်ခိုင်းနှင့်ကဒ်ဂိမ်းများ, slot ကစက်တွေ, ဖဲချပ်အဖြစ်ဂိမ်းများကိုဆော့ကစားနိုင်ပါတယ်။ Svenska Spel ပိုင်ဆိုင်သမျှသောဤဂိမ်းကိုဆက်ကပ်ရန်သီးသန့်ပိုင်ခွင့်။ တရားဝင်မှုအဘို့, ဆှီဒငျလောင်းကစားစျေးကွက်၏လုံခြုံမှုနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရဆွီဒင်နိုင်ငံတွင်လောင်းကစားဝိုင်း၏တာဝန်ရှိစီမံခန့်ခွဲမှုဖြစ်ပါတယ်။
ယနေ့အထိ, ဆွီဒင်တွင်အွန်လိုင်းလောင်းကစားစည်းမျဉ်းသတ်မှတ်မထားပါ။ အစိုးရပိုင်လက်ဝါးကြီးအုပ် Svenska Spel အွန်လိုင်းဖဲချပ်နှင့်အွန်လိုင်းဘင်ဂိုကစားပူဇော်ရန်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ သို့သျောလညျး, လောင်းကစားအပေါ်ကျွမ်းကျင်သူများကအွန်လိုင်းလောင်းကစား၏အခြားပုံစံများကိုတစ်ဦးလိုင်စင်စနစ်အားမိတ်ဆက်ပေးခွင့်ပြုလတံ့သောဆွီဒင်တွင်အွန်လိုင်းလောင်းကစားအပေါ်တည်ဆဲဥပဒေများတွင်ဖြစ်နိုင်သမျှသောအပြောင်းအလဲကြေညာခဲ့သည်။
ထိပ်တန်း 10 ဆွီဒင်အွန်လိုင်းကာစီနိုဆိုဒ်များများစာရင်း
ဆွီဒင်နိုင်ငံတွင် - ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခရီးကိုယနေ့သမိုင်း, နှစ်သိမ့်ခြင်းနှင့်အမိန့်ကြွယ်ဝတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါသည်။ CasinoToplists, ထိုမြင်ကွင်းများကိုတွေ့မြင်ရန်ဤအံ့သြဖွယ်နိုင်ငံပိုင်ထိုက်သောနှင့်အစဉ်အလာပေးထားပါတယ်။ နှင့်အညီ, သင်တန်း၏, ကာစီနိုလောင်းကစားရုံများနှင့်လောင်းကစားအကြောင်းအများကြီးသင်ယူကြသည်။
ဆွီဒင် - တည်နေရာနှင့်သမိုင်း၏အတော်လေးနည်းနည်း;
အဓိကအားဖြင့်ယင်းသို့ Sundsvall), မာလ်မို, ဂိုနှင့်စတော့ဟုမ်း, တိုင်းပြည်၏မြို့တော်အဖြစ်မြို့ကြီးများတွင် built-in;
+ စားဆင်ယင် code ကို 20 နှစ်ပေါင်း။
ဆွီဒင်နှင့်၎င်း၏လူဦးရေနှင့် ပတ်သက်. စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းအချက်အလက်များ။
ဆွီဒင်ယမ်၏အရှေ့ပိုင်းနှင့်တောင်ပိုင်းဒေသများတွင်မြောက်ပိုင်းဥရောပတိုက်တွင်တည်ရှိသည်။ အနောက်ဘက်၌နယ်နိမိတ်နော်ဝေနှင့်နီးစပ်သောဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, မြောက်ဘက်-အရှေ့ - ဖင်လန်နှင့်အတူ။ ဒိန်းမတ်ကနေ Straits Öresund, Kattegat နှင့် Skagerrak ခွဲခြားရန်။
၎င်း၏ကြွယ်ဝချမ်းသာသည့်နိုင်ငံ 17th ရာစုအတွင်းအောင်မြင်ပေမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရုရှားနိုင်ငံနှင့်အတူမြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်က၎င်း၏ဦးဆောင်အနေအထားကိုစောင့်ရှောက်ဖို့မတတ်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ 1809 ခုနှစ်တွင်ဆွီဒင်က၎င်း၏အရှေ့ပိုင်းနယ်မြေများအချို့ဆုံးရှုံးခဲ့ရခြင်း, အိမ်နီးချင်းဖင်လန်အပေါ်သက်ရောက်မှုဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။ ဆွီဒင်အမြဲအကြိမ်ကြိမ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်၏အချိန်အပါအဝင်အစိုးရကိုကူညီထားပြီးဂျာမနီ၏ဘေးထွက်ပေါ်နှင့်သမိုင်းတစ်လျှောက်လုံးရှိခဲ့သည်။
ဆွီဒင်နိုင်ငံသားတစ်ဦးလက်တွေ့ကျတဲ့လူတွေဖြစ်ကြပြီးငါကလောင်းကစားအပေါ်အမှိုက်သရိုက်ပြန်လည်သို့မဟုတ်ဝင်ငွေရဲ့ရှိမရှိ, အကျိုးကျေးဇူးများအပေါငျးတို့သရနိုင်အောင်ကြိုးစားပါ။ တိုင်းပြည်၌သင်တို့ကိုပျော်စရာအဘို့, ဒါပေမယ့်နိုင်ငံတော်ကတင်းကျပ်သောထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင်ကစားနိုင်ပါတယ်။ ဒီတော့ 1999 အတွက်4ကာစီနိုလောင်းကစားရုံတိုင်းပြည်အကြီးဆုံးမြို့ကြီးတွေမှာ built ပြီ: Sundsvall (ထိုဘူတာရုံအဆောက်အဦးကနေပြန်လည်ဆောက်လုပ်) , မာလ်မို , ဂို နှင့်မြို့တော်, စတော့ဟုမ်း။ ဒါဟာတိုင်းပြည်«ကာစီနို Cosmopol စတော့ဟုမ်း»၏အကြီးမားဆုံးလောင်းကစားရုံဖြစ်ပါတယ်။ မတ်လ 2003 နှင့်သင်လိပ်စာ Kungsgatan 65 မှာရှာတွေ့နိုင်ပါသည် - ဒါဟာအတော်လေးမကြာသေးမီကဖွင့်လှစ်။ ဒီနေရာတွင်ကစားတဲ့အတွက်အဖြစ် Blackjack, ကာရစ်ဘီယံလုံးနှင့် Baccarat ကစားနိုင်ပါလိမ့်မည်။ အဆိုပါလောင်းကစားရုံဖဲချပ်ဝေပြိုင်ပွဲအခါအားလျော်စွာကျင်းပကြသည်။ ဖဲချပ်ထဲမှာသင်ဖုန်းပေါ်မှာ Pre-မှတ်တမ်းတင်ထားသောနှစ်ဦးစလုံးကစားနိုင်ပါတယ်, နှင့်ဂိမ်းနေ့၌ join ။ ဧည့်သည်နံနက်ယံ၌ 13.00 ထံမှ 5.00 မှနေ့စဉ်မည်ဟုမျှော်လင့်နေကြသည်။
အဆိုပါလောင်းကစားရုံ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်န့်အသတ်ရှိပါတယ်: သင် 20 သို့မဟုတ် သာ. ကြီးမြတ်ပါ (ဝင်ပေါက်မှာသင့်ရဲ့နိုင်ငံကူးလက်မှတ်စစ်ဆေးပါလိမ့်မယ်) နှင့်ယူနီဖောင်း«မတ်-ပေါ့ပေါ့» (စမတ်ပေါ့ပေါ့) ၏အယူအဆလိုက်နာရမည်ဖြစ်ရပါမည်။ ဆွီဒင်ခရိုနာ - ယူရိုယေဘုယျအားဖြင့်ဆွီဒင်အတွက်အသုံးမသည်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ငွေကြေးအဲဒီမှာလုပ်ကိုင်ကြောင်းသတိပြုပါ။
- ဝါတော်ပြတိုက် ။ ပြတိုက်လိပ်စာ: Galärvarvsvägen, 14 ။ ဒါကတစ်ဦးပုံမှန်မဟုတ်သောပြတိုက်ဖြစ်ပြီး, 17th ရာစုကတည်းကထိန်းသိမ်းထားခဲ့ပြီးသောသင်္ဘောကို။ စကားမစပ်ကမ္ဘာပေါ်မှာတစ်ဦးတည်းသာ။ အားလုံးထွင်းထုဒီဇိုင်းများနှင့်ပန်းပု၏ 95% ဟာသူတို့ရဲ့မူလပုံစံကိုစောင့်နေကြတယ်။ အခုတော့သင်္ဘောသင်သည်လည်း (16 ဘာသာစကားများ) ကိုပြပွဲအကြောင်းရုပ်ရှင်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်ဘယ်မှာရည်ရွယ်ချက်-built ပြတိုက်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။
- အဲဖရက်နိုဘယ်လ်ပြတိုက် ။ နေရပ်လိပ်စာ: Börshuset, Stortorget, Gamla Stan ။ ဒီနေရာမှာ 800 ဆုဆုရရှိသူ၏ပုံတူရုံနံရံအလှဆင်ခြင်း, အခြောက်အသန့်ရှင်းရေးအတွက်ယန္တရား၏ကြင်နာပေါ်ရွေ့လျားကြသည်မဟုတ်။ ဤသည်သာတစ်ဦးအလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဒီဇိုင်းဖြစ်ပါတယ်ပြတိုက်အတွက်အာကာသကယ်ဖို့ကူညီပေးသည်။ သို့သော်တစ်ကြိမ်နောက်တစ်ကြိမ်ကပြတိုက်သိပ္ပံပညာ၏အောင်မြင်မှုထံအပ်နှံကြောင်းပြန်ပြောပြသည်။ ကလေးတွေနဲ့အတူအရွယ်ရောက်သူသူ့ကိုယ်ပိုင်ထူးချွန်ရှာဖွေတွေ့ရှိအချို့ပြန်လုပ်နိုင်ပါတယ်ဘယ်မှာအပြန်အလှန်အဆောက်အဦလည်းရှိပါတယ်။
- "Skansen" ပြတိုက်။ နေရပ်လိပ်စာ: Djurgardsslatten 49-51 ။ လတ်ဆတ်သောလေထုထဲတွင်နာရီစုံတွဲတစ်တွဲများအတွက်ဆွီဒင်၌ရှိသမျှသောသွားရောက်ကြည့်ရှု? အလွယ်တကူ! နှင့်ဆွီဒင်ယဉ်ကျေးမှု "Skansen" ၏ပြတိုက်မှဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုကျေးဇူးတင်စကား။ ဤတွင်အိမ်သူအိမ်သားများနှင့် 18-19 ရာစုနှစ်များစွာ၏အိမ်ခြံမြေဖြစ်ကြသည်။ ပြတိုက်အခြေချနေထိုင်သိမ်းသွားလေ၏၏ပိုင်နက်တွင်မိမိတို့၏နေ့စဉ်လှုပ်ရှားမှုများနှင့်အတူအလုပ်ရှုပ်နေကြသည်, သင်မည်သို့ shoemaker, Baker နှင့်ဖန်မှုတ်တံကိုကြည့်နိုင်ပါတယ်။
- "Junibacken" ပြတိုက်။ တည်နေရာ: စတော့ဟုမ်းအတွက် Djurgarden ကျွန်း။ ဒါဟာ Astrid Lindgren နှင့်ကလေးများနှင့်သူမ၏အလုပ်အပေါငျးတို့သပရိတ်သတ်များအဘို့ပရဒိသု၏ကျော်ကြားပုံပြင်များတစ်ဦးပြတိုက်ဖြစ်ပါတယ်။
ဆွီဒင်အတွက်အမည်သစ်ကိုရသော Carlson / Karlsson နှင့်အတူ 300,000 ကလူထက်ပိုပြီးရှိပါတယ်;
ဤတိုင်းပြည်များတွင်ပျမ်းမျှအသက်ကျောင်းသားများကို - 26 နှစ်ပေါင်း;
ဒါဟာအလွန်မြင့်မားအခွန်အခများ - ထိုအမြတ်အစွန်းများ 22%;
« ICEHOTEL » - ဆွီဒင်တွင် "ရေခဲပြင်ဟိုတယ်»ရှိပါတယ်။ 200 ကီလိုမီတာမြောက်ဘက် Jukkasjarvi များ၏ရွာများတွင်အာတိတ်စက်ဝိုင်း၏အမှန်တကယ် "တဲရေခဲ" ဖြစ်ပါတယ်။ စီးကနေမှသာနွေဦးရရှိနိုင်ရှိနေဆဲဖြစ်သောကြောင့်သူမရဲ့, နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းပြန်လည်တည်ဆောက်။ ဒီနေရာတွင်, ရေခဲ၏ဖန်ဆင်းတဲ့ပန်းပုထွင်းရေခဲငါးဖမ်းများအတွက် သွား. , aurora borealis အားသက်သေဖြစ်မည်ဖြစ်ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါတယ်;
"Snus" - ပျော့ပျောင်း, ဖျက်စီးရမဲ့ဆေးရွက်ကြီး။ ဆွီဒင်ကအထက်နှုတ်ခမ်းအောက်မှာနေရာချခြင်းနှင့်သမားရိုးကျစီးကရက်ရာများတွင်အသုံးပြုလျက်ရှိ၏
ဆုံးအကြိုက်ဆုံးဟင်းအဆိုပါ kebab ပီဇာ (အသား, ဒိန်ခဲ, မုန့်စိမ်းနှင့် kebabs များအတွက်အထူးငံပြာရည်) ဖြစ်ပါသည်။ မကြာခဏအစားညစာ၏နေအိမ်တစ်မိသားစု, အနီးအနားရှိကဖေးသို့မဟုတ်အမြန်အစားအစာကွင်းဆက်သွားရောက်ချစ်သောသူ;
ဆွီဒင်ရာကျော် - ဒီနေရာမှာသက်တမ်း 80 နှစ်ပေါင်း (ဥရောပတစ်ခုလုံးအတွက်အကောင်းဆုံးညွှန်းကိန်းများထဲမှ) ကျော်ရှိ၏
ဆွီဒင်နိုင်ငံသားများကသူ့နိုင်ငံ၏အရင်းအမြစ်များအများကြီးစဉ်းစားနဲ့အမြော်အမြင်ရှိရှိစွမ်းအင်ဖြုန်း။ ဥပမာ, သဂြိုဟ်စက်ခေါင်းတိုင်ကနေ Bora လျှပ်စစ်ဓါတ်အား၏မြို့မှာရှိတဲ့မြို့ (60,000 အိမ်များ, လိုအပ်သောစွမ်းအင်၏ 10%) မှာအပူအသုံးပြုသည်။ အဝတ်လျှော်စက်ကိုမှာအားလုံးမဟုတ်ပါ - ဒီမှာ shared ရေချိုးခန်းအခန်း၏အသုံးပြုမှုကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏။
0.2 ထိပ်တန်း 10 ဆွီဒင်အွန်လိုင်းကာစီနိုဆိုဒ်များများစာရင်း